गर्भावस्था - एक महिलाको जीवन मा एक महत्वपूर्ण र happiest क्षण। समय को कदर दिन आफ्नो आमाको गर्भबाट बच्चा बाहिर निस्कन आउँदा, म जटिलताहरू बिना पारित सबै गर्न चाहन्छु। बच्चा तल वा सक्रिय calms जन्म अघि: धेरै आमाबाबुले एउटा प्रश्न छ?
प्रसब को दृष्टिकोण संग बच्चा को व्यवहार कस्तो छ?
त्यहाँ शान्त भएका छोराछोरी छन् रूपमा चिन्ता गर्न, र आउँदै जन्म सक्रिय हुन बन्द कुनै कारण। यो विशिष्ट व्यवहार छ। फल ऊर्जा-खपत आन्दोलन लिएको छैन। किनभने आमाको पेट बाहिर एक आसान प्रक्रिया मानिस, ऊर्जा आवश्यक छ।
तथापि, भ्रूण सबै सार्दा थिएन भने, यो एक पटक फेरि आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न थप कारण छ। पक्कै पनि उपयोगी छैन expectant आमा अनावश्यक disturbances जोगिन गर्न, यो जन्म अघि बच्चाको व्यवहार बुझ्न आवश्यक छ।
भ्रूण प्रिपेरेटरी स्थिति लिन्छ जब महिला पेट को बोझको प्राधिकरण अघि दुई हप्ता पर्छ। यो आगामी JERK अघि कम सुरु एक प्रकारको छ। प्लस यसलाई किनाराको मा दबाव गायब छ। यो बच्चा को femur आयोजित। intrauterine फल पानी घट्दै संग cramped महसुस। यस समयमा, वृद्धि रोक्छ।
साना मानिस बल बटोरता। एकदम बलियो रहनेबारे जोडदार अब अघिल्लो 37 सप्ताह समयमा थियो भने, इच्छित मुद्रा फेला पछि, यो रोक्छ। बच्चालाई तल वा सक्रिय calms जन्म अघि, थाहा नगर्ने ती, यस्तो परिवर्तन सजग हुन सक्छ, तर त्यहाँ चिन्ता लागि कुनै कारण छ।
आन्दोलन शायद बाहिर, तर थप शक्तिशाली अघि भन्दा हुन्। यो, को थैली समय समयमा महिलाहरु दुख्छ किनभने, अक्सर सानो आवश्यकता मनाउन चाहन्छु। अन्तिम दुई हप्ता मा, बच्चाहरु जन्म लागि तयार गर्दा तिनीहरूले कम सार्दै हुनुहुन्छ।
बच्चा अघि वितरण व्यवहार कसरी अन्वेषण गर्दा - subsides वा सक्रिय सार्दा छ, expectant आमाले हकदार भनेर discovers र यो मुद्दा मा एक आतंक जुटाउने बसोबास सोच्छ, पनि, छैन यो लायक छ। यो आसन्न जटिलताहरुलाई एक लक्षण छैन।
यसरी जन्म आफ्नो इच्छुकता व्यक्त गरेका बच्चाहरु मार्फत आउनुहोस्। तिनीहरूले शाब्दिक दुनिया हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। यो अवस्था सकारात्मक पक्ष एक महिला निरन्तर बच्चालाई, चिन्ता छैन, अन्धकारमा रहेको महसुस छ। आमा र बच्चाहरु सम्भव के चाहेको परिणाम बुझ्न बनाउने, अचेतन संचार सेट बीच।
जन्म अघि बच्चाहरु को व्यवहार देख्दा गर्दा, तपाईं अत्यधिक गतिविधि सूचना, यो अन्तरक्रिया मात्र बलियो हुनेछ। यस प्रकारको को व्यवहार पूर्ण सामान्य छ, र बच्चा को छूट - यो सामान्य नियम, तर सम्भव परिदृश्य को मात्र छ।
जब म चिन्ता गर्नुपर्छ?
जन्म वा सक्रिय हराउँछ अघि बच्चा, मात्र घटनाको अचाक्ली मा चिन्ता कसरी विश्लेषण। यो बच्चाहरु शान्त भन्ने हुन्छ। झटके को आकस्मिक विच्छेदन - यो एउटा भयावह साइन छ।
दिन कम्तिमा छ परकम्पन हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यो आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न उचित छ। यसलाई बरु राम्रो चिन्ह, नकारात्मक भन्दा छ - जन्म अघि बच्चाहरु को व्यवहार नियालेर, यो कस्तो यसलाई चलाउनु थाहा आवश्यक छ।
गतिविधि पूर्ण कमी संग एकदम विपरीत सबै। यो जरूरी पदार्थ सामान्य कामकाज लागि बच्चाको कमजोरी कमी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सूर्य अन्तर्गत स्थानको लागि लड्न बल भइरहेको छैन, यो गर्भमा बाहिर प्राप्त गर्न सक्षम हुन असम्भाव्य छ।
यो जन्म लागि तयार हुँदा बच्चाको व्यवहार अनुसार स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ, आमा यो महत्त्वपूर्ण घटना लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
छैन त महत्त्वपूर्ण, जन्म अघि बच्चा तल वा सक्रिय calms। थप जरुरी कार्य impulses गणना गर्न कहाँ छ। यो गणना यो हल्का गर्न जानुअघि बच्चालाई लागि लिन्छ समय बारे जानकारी दिन्छ। दिन कम्तिमा छ perturbations लागि गरिन्छ जब मामला मा, त्यहाँ चिन्ताकारक मा कुनै पनि बिन्दुमा छ। पछिल्लो हप्ता मा बच्चाहरु एक दिन 48 पल्ट सार्दै हुनुहुन्छ।
तसर्थ, बच्चा सक्रिय वा subsides जन्म अघि प्रश्नको जवाफ, को गल्ती यसलाई धेरै सामान्य भन्दा शान्त छ भनेर भन्न छ। बस आवृत्ति परिवर्तन र प्रेस शक्ति वृद्धि।
Hyperactivity पनि एक स्वस्थ साइन छ। 60 perturbations, तिनीहरूको संख्या निकै सानो छ रूपमा, - जीवन-समर्थन पदार्थ को एक चिन्ह कमी। केही छोराछोरीलाई अरूको सक्रिय आफ्नो आवश्यकता व्यक्त गर्दा, आफ्नो हात, उनि भन्छन्, राख्नु र केही गर्न। जन्म अघि बच्चाको व्यवहार हेर्ने, र अत्यधिक गतिविधि टिप्पण, यो अक्सिजन अनिकालबाट को कुरा गर्न सम्भव छ।
किन tremors विचार
भ्रूण आन्दोलनहरु को संख्या बच्चा जन्मन जाँदै गर्दा बुझ्न कार्यान्वयन गणना। कसरी छैन कि यी वा अन्य कारक को जन्म जटिल, साना मान्छे हो यो स्पष्ट हुन्छ। उनको हालत निगरानी गर्ने मौका छ।
यो बच्चाहरु6भन्दा कम वा प्रति दिन 60 भन्दा बढी पटक सार्दै गर्दा यो महत्वपूर्ण मात्र चरम अवस्थामा छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यो 45-50 बारेमा आघात को एक सामान्य रकम मानिन्छ। तिनीहरूले आवधिक हुनुपर्छ। आमा प्रत्येक घण्टामा संख्या गणना।
सिफारिसहरू expectant आमा
भ्रूण आन्दोलनहरु को अवलोकन संग तालिका राख्न उपयोगी। यो बच्चाको अवस्था मा परिवर्तन देखाउन उपकरण हो। को खामोशी छैन सधैं आसन्न जन्म चिन्ह छ। फल घुमाइयो हुनुपर्छ।
perturbation अन्तर्गत केहि सेकेन्ड मा कुनै पनि देख्न सकिने आन्दोलन वा पुस चाहनुभएको। सक्रिय गर्न पहिलो-जन्म, तपाईं जस्तै चकलेट छिटो कार्बोहाइड्रेट केहि खान सक्छ। त्यसैले उहाँले नयाँ ऊर्जा र जाँगरको प्राप्त हुनेछ। एक खाजा पछि बायाँ छेउमा झूठ राम्रो छ।
बच्चाहरु जन्म दुई हप्ता भन्दा ढिलो तल मर्न हुँदैन। यदि गणना समय नजिक आउनु भएको छ, र गतिविधि घट्यो छ, यो एक डाक्टरसँग परामर्श लिनु आवश्यक छ। यसको आफ्नै विश्लेषण र गणना मात्र होइन एक अवचेतन भावना आधारित बच्चा को आन्दोलनहरु निगरानी अज्ञानता को सास्ती देखि आमा राहत र, बच्चा को समृद्ध अवस्थामा विश्वस्त हुन नियन्त्रणमा स्थिति राख्न तिनीहरूलाई मदत, तर पनि।
गर्भावस्था को पहिलो दिन - परीक्षण अघि पहिचान कसरी
को ध्रुवीय भालू खान? ध्रुवीय भालू पेंगुइन खान्छन्?
हेमाटोलजी केन्द्र, सेन्ट पीटर्सबर्ग: ठेगाना, गतिविधिहरु, समीक्षा
को क्रेफिश कसरी खाना पकाउनु? धेरै व्यञ्जनहरु
विन्डोज 10 "सुरुवात" मेनुमा सेटिङ: प्रक्रियाहरु, निर्देशन
वजन किन जान्छ, र मात्रा छैन? शरीर बाट उत्पादन तरल पदार्थ रूपमा? आहार र स्वास्थ्य आहार